Olee otú imelite LG G3 ka Android 7.1.1 (nlereanya D855) | Gam akporosis
Francisco Ruiz | | LG, ROM, Nkuzi
Ọ bụrụ ụnyaahụ ka m kuziri gị otu esi melite LG G2 na gam akporo 7.1.1 Nougat, ugbu a ọ bụ nwanne ya nwoke nke okenye ka ọ dị na nkuzi vidio ọhụrụ a aga m akụziri gị melite LG G3 na gam akporo 7.1.1 Nougat.
A nkuzi bara uru naanị maka mba ụwa D855 na ebe ị ga-ahụ ihe niile ị ga - achọ iji nọgide na - anụ ụtọ LG G3 gị, ya bụ, nwee nnukwu mmiri nke sistemụ ahụ ma na - agagharị ụdị ọhụụ kachasị ọhụrụ nke Android ruo ugbu a. Ekwadoro m ka ị lelee vidiyo m hapụrụ n'elu akara ndị a, vidiyo ị nwere ike ịnweta site na ịpị ebe a n'okpuru ebe ọ na-ekwu "Nọgidenụ na-agụ ..."; a video nke m na-akọwa nzọụkwụ site nzọụkwụ usoro ịgbaso na mgbakwunye na-ezi gị ihe olee otú ezigbo gam akporo Nougat si ele LG LG G3 m anya D855.
1 Chọrọ iji na akaụntụ iji melite Lg G3 ka Android 7.1.1 Nougat
2 Etu ị ga-esi gbanye usoro LG G3 nke ụwa
3 Faịlụ chọrọ iji melite LG G3 na gam akporo 7.1.1 Nougat
4 Rom LinageOS nwụnye usoro LG G3 mba
Chọrọ iji na akaụntụ iji melite Lg G3 ka Android 7.1.1 Nougat
Ihe mbụ ga-abụ nwere LG G3 mba dị iche iche gbanyere mkpọrọgwụ yana gbanwere ihe gbanwereỌ bụrụ na ịmaghị otu esi enweta nke a, nke dabere na ụdị nke gam akporo ị nọ ugbu a, lee ụfọdụ njikọ dị iche iche nke m mere n'oge gara aga ebe m gosipụtara gị nzọụkwụ site na otu esi enweta mgbọrọgwụ LG G3 Model D855 dị ka mbipute nke gam akporo ị rụnyere:
Etu ị ga-esi gbanye usoro LG G3 nke ụwa
Ọ bụrụ na ị nwere gam akporo 6.0 Marshmallow pịa ebe a.
Ọ bụrụ na ị nọ na ụdị gam akporo Lollipop ị nwere ike pịa njikọ a.
Ọ bụrụ na ị ka nọ na ụdị gam akporo Kit Kat ị ga-pịa a njikọ..
Mgbe ọ nwụsịrị Mgbọrọgwụ na wụnye gbanwetụrụ mgbake gị LG G3 I kwesiri iburu n'uche ihe ndia:
Nwee TWRP Iweghachite emelitere na nke kachasị ọhụrụ ka m na-egosi gị na vidiyo agbakwunyere
Nwee nnomi ndabere nke folda EFS ọ bụrụ na ijiji ahụ efe.
Nwee nkwado ndabere, nadroid ndabere nke anyị dum sistemụ ọ bụrụ na anyị chọrọ ịlaghachi n'oge ọ bụla na steeti gara aga tupu Flasheode LinageOS 14.1
Nwere USB debugging nyeere site na Ntọala Onye Mmepụta.
Mee ka batrị ahụ bido na 100 x 100.
Faịlụ chọrọ iji melite LG G3 na gam akporo 7.1.1 Nougat
Budata 21C Redio ma ọ bụ Mọdem
Budata ụdị TWRP kachasị ọhụrụ ebe a.
Budata Rom LinageOS site na njikọ a, M na-ahapụrụ gị otu nke December 29 ebe ọ bụ na nke Jenụwarị naanị na-ahapụ gị ịwụnye ma ọ bụrụ na ị nwere ihe ọzọ gam akporo ọnụ n'aka site na ntọala Google.
Budata Google Gapps site na njikọ a, cheta ibudata ya ARM + gam akporo 7.1 na ọkacha mma nano ma ọ bụ micro
Anyị na-e copyomi faịlụ ndị a niile n'ime, mpụga ma ọ bụ Pendrive ebe nchekwa ka Flash site OTG dị ka ọdịmma anyị na nke mbụ, anyị na-emelite Iweghachite site na Flashify na-eme n'ihu ma ọ bụrụ na anyị chọrọ nkwado ndabere nke mgbake anyị ugbu a.
Ozugbo anyị emelitere TWRP Iweghachite na mbipute 3.0.2, anyị gbanyụọ ọnụ kpamkpam ma malitegharịa ya ọzọ n'oge a na ọnọdụ Iweghachite ịgbaso ntuziaka ndị a na leta ahụ:
Rom LinageOS nwụnye usoro LG G3 mba
Hichapụ na anyị Hichapụ ihe niile belụsọ ebe anyị nwere faịlụ ndị dị mkpa maka nwụnye Rom. Anyị na-eme nke a ruo ugboro ise n’usoro.
Anyị na-aga nhọrọ wụnye y anyị na-agbanye redio 21C n'ejighị ụdị Wipe ọ bụla
Anyị na-aga nhọrọ wụnye y anyi buru uzo hota zip nke Rom LinageOS ma horo zip nke Gapps.
Anyị na-eme ka ogwe dị n'okpuru mee ihe a rịọrọ na anyị na-eche ka usoro mgbukepụ nke Rom na Google Gapps gwụ, usoro nke na-agaghị adịgide karịa ihe dị ka nkeji ise.
Anyị họrọ nhọrọ nke Hichapụ Dalvik na Cache anyị na-akpali ụlọ mmanya ahụ ọzọ.
N'ikpeazụ, anyị nwere ike ịhọrọ nhọrọ nke Reboot System iji kporie Android 7.1.1 Nougat na LG G3 D855 anyị.
Site n'ịgbaso usoro ndị a dị mfe ị nwere ike gaa n'ihu na-ekpori ndụ LG G3 nlereanya D855 ya na ụdị nke gam akporo 7.1.1 Nougat kachasị ọhụrụ n'agbanyeghị ole ha n'agbanyeghị ndị LG.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » ROM » Otu esi emelite LG G3 na gam akporo 7.1.1 (ihe atụ D855)
Daalụ maka onyinye… ihe niile na - ejere gị ozi?
Zaghachi Orlando Barbas
Daalụ nke ukwuu! M gbanye mgbọrọgwụ m lg g3 na android 6.0 ekele ọzọ nke gị nkuzi, na m arụnyere android 7 ekele a nkuzi. Ana m akwado ya kpamkpam.
Ma ntakịrị obi abụọ. Ugbu a, mgbe ị na wụnye na inoid 7 onye na-achọpụta mgbọrọgwụ na-agwa m na agbanyeghị mgbọrọgwụ. Ajuju m bu:
- na gam akporo 7 a na-ewepụ mgbọrọgwụ (nke m chere na ọ ga-adịgide adịgide)
- ma ọ bụ emehiela m ihe? ezi ekwe omume hahaha
Ndewo, ajụjụ, etinyewo m ya, mana enweghị m ike ịchọta nhọrọ ahụ n'elu. dị ka MIRACAST na SMART SHARE BEAM… Ebee ka m ga-ahụ ha? Daalụ
O di nwute na ị na-atụfu ihe ụtọ niile na-eme ka anyị hụ LG n'anya
Mgbe anyị wụnye melite, lg anyị dị ka ekwentị ọzọ ...
onye nkwutọ dijo
Enwere m 2 g3 d855 mgbe m chọrọ imelite ha na marsmalow ha bricked na enweghị m ike iweghachite ha ma ọ bụrụ na ị nwere ike inyere m aka, m ga-enwe ekele maka ya
Android 7.0 Nougat amalitela itinye ya na HTC 10, 10 Web na One M9 na Europe
Xiaomi na-ere 250.000 Redmi Rịba 4 na nkeji 10 na mbido ọkụ mbụ na India